Muchokwadi, isu tine zviuru zvezvigadzirwa zvikuru muzvikamu zvese zvechigadzirwa. Kunyangwe iwe urikutsvaga akakwira-magumo ekunyora kana zvakachipa, mari yakawanda kutengwa, isu tinovimbisa kuti inogona kuwanikwa pane Melikey. Kana iwe uchida kutenga kadiki tafura, Melikey anogona kuve nechokwadi chekuti unogara uchidada nekuva nesarudzo yehungwaru. Kudya kwevana kunoisa tarisiro pakukura kwakanaka kwemwana.
Isu tinopa akasiyana tafura yevana, kusanganisira yemwana bhebhi, yekudyisa mwana ndiro, mwana ndiro ndiro, kapu yevana uye mukombe, nezvimwe. Yedu yemwana dinnerware ine akawanda akanaka mapurani, ayo anofanirwa kuve akakodzera mwana wako. Izvo zvinhu zvezvigadzirwa zvedu zvakachengeteka kwazvo, zvinonyanya kukamurwa kuita matanda uye silicone. Matanda echisikigo uye chikafu giredhi silicone inobvumira vacheche kuti vakure mune chikafu chine hutano. Mahwendefa evacheche nendiro dzakatarwa zvinozivikanwa kwazvo mumusika. Yevacheche yekukweva mbiya uye silicone yemwana maplate inogona kuenderana neyedu mamwe emwana machina china seti. Izvi zvakakosha pakuzvipa kwemwana kudya panguva yekudya, zvakagadzirisawo matambudziko emam. Rega kudya kwemwana kuzere nekunakidzwa!
Yedu yemwana chisvusvuro seti inouya mumhando dzakasiyana, kusanganisira mukomana nemusikana vara Zvinoenderana neicho chaicho vatengi 'ongororo yebasa redu, mutengo uye mhando, ivo vanogutsikana kwazvo. Kana isu tikarongedza zvigadzirwa uye tisati tatumira, isu tinoronga zvekufambisa mushure menzvimbo nhatu dzakaomarara kuongororwa kuti tione kuti hapana dambudziko nenhumbi.
Isu hatisi chete checheche tafura yekutengesa asiwo chigadzirwa chemanheru. Isu tinopa yakasarudzika yakasarudzika yemwana chisvusvuro seti, logo inogona kuve yakakomberedzwa pamucheche chisvusvuro seti silicone uye yemapuranga mwana chisvusvuro seti. Isu tinogadzira zvigadzirwa zvakaisvonaka uye kurongedza kwevatengi. Kana iwe uchifarira mwana wedu china dinnerware, ndapota taura nesu. Bhizinesi raMelikey, dhizaini, kugadzira, gungano, uye madhipatimendi ekuongorora zvemhando yepamusoro anokupa nemoyo wese sevhisi yakanakisa. Pakati pevazhinji vatengesi vetafura, Melikey haakuregedze.
Yakanakisa yemwana chisvusvuro yakatarwa, yakapfupika uye yakapusa dhizaini dhizaini, inoyevedza uye inotapira ruvara, Regai mwana adye ane mavara uye anonakidza. Baby dinnerware zvipo seti zvinogona kupihwa kune vese vacheche.
1. Isina mvura isilicone mwana dinnerware zviri nyore kupukuta nekuchenesa
2. Silicone mucheche kucheka zvakapfava, Flexible Uye Nyore Kupeta
3. Silicone mucheche tafura yakakwira tembiricha inopesana
5. Chikafu chegiredhi mwana silicone tafura, isina-chepfu uye yakachengeteka
Baby Yekunwa Mukombe BPA Mahara Cartoon Dhizaini Straw ...
Baby Yekunwa Mukombe Nouswa Leak Uchapupu Chikafu Gr ...
Silicone Mucheche Mukombe Kudzidziswa Sippy Mucheche Eco Fri ...
Silicone Snack Mukombe Mucheche Inowira Wholesale F ...
waterproof silicone bib ine muhomwe l Melikey
Silicone Mudiki Plate Dishes Akakamurwa Kudya kwemanheru OE ...
Silicone Baby Plate Yakakamurwa Wholesale l Melikey
Baby Spoon Uye Forogo Set Stainless Simbi Achangoberekwa
Mucheche Kudya Bowl uye Spoon Kudurura Uchapupu l Melikey
Vacheche maBhaibheri Nemakuru Chikafu Giredhi l Melikey
Silicone Mucheche Plate Tafura Gadzira Cartoon l Mel ...
Silicone Mucheche Bowl Kubvisa Kudya Hakuna Kudurura l M ...
Silicone Kucheka Kudya Mwana uye Maforogo Gadza BPA F ...
teething nechishongo mwana musikana, silicone teether , teether yakanakisisa 4 wemwedzi , silicone mwana teether , rwokuzvarwa teething, silicone teething marozari ,